नेपाली मूलकी एक मात्र घोडे पोलो खेलाडी केमिका भण्डारीको टोली पोलो प्रतियोगितामा बिजयी - Namasteholland, News, Information and Technology
नेपाली मूलकी एक मात्र घोडे पोलो खेलाडी केमिका भण्डारीको टोली पोलो प्रतियोगितामा बिजयी
८ कार्तिक २०७५, बिहीबार ०९:००038
अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यमा बस्दै आएकी नेपाली मूलकी घोडे पोलो महिला खेलाडी केमिका भण्डारीको टोलिले गत अक्टोबर २० तारिखका दिन सम्पन्न पोलो मैत्रीपूर्ण प्रतियोगितामा बिजयी हासिल गरेको छ ।
पोलो खेल प्रतियोगितामा ७ मिनेटमा बिश्राम गर्दै पुन खेल खेलाउने र ४ पटक उक्त क्रम हुने हुनाले पोलो चक्कर नाम द्वारा पनि सम्बोधन गरिने गरिन्छ । अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यको पश्चिमी भागमा अवस्थित पुल्सभिल शहरमा सम्पन्न पोलो चक्करमा भण्डारीको खेल टोली ९-८ गोलले बिजयी भएको थियो । उक्त दिन चार वटा खेल समूह बीच भएको प्रतियोगितामा भण्डारी कंग्रेसनल पोलो क्लबबाट खेलेकी थिइन् । कंग्रेसनल पोलो क्लबले समरहिल पोलो कल्बलाई मैत्रिपूर्ण खेलमा हराएको थियो ।
भण्डारीको टोलीका ३ जना र विपक्षका ३ जना गरेर ६ जना खेलाडीहरु रहेका थिए । उक्त खेलमा पुरुष तथा महिला दुवैले खेल्न सक्ने छन् भने उक्त खेलमा एक निर्णायक रहेका थिए । उक्त खेलमा १० मिनेटको मध्यान्तर रहेको थियो ।
भण्डारीको टोलिले पहिलो चरणमा खेल्न पाएको थियो भने अर्को टोलिले दोश्रो चरणमा खेल खेलेको थियो । अर्को खेल समूहमा माउनटेनभ्यू पोलो क्लबले सेनेका पोलो कल्ब बिरुद्ध खेल खेलेको थियो । मेरिल्याण्डको पुल्सभिल स्थित सेनेका पोलो क्लबमा सम्पन्न उक्त पोलो चक्कर खेलाइएको थियो ।
आयोजकले उक्त मैत्रिपूर्ण खेलमा सहभागी हुने सबैलाई मायाको चिनो स्वरुप मग प्रदान गरेको थियो । उक्त घोडे पोलोमा ७ मिनेट खेलाइने गरिन्छ भने ४ मिनेटको बिश्राम लिइन्छ । बिश्राम पछि सोही घोडा प्रयोग नगरी अर्को घोडामा चढेर पोलो खेल्नु पर्ने हुन्छ । जम्मा २८ मिनेटको खेलमा ४ वटा फरक घोडा प्रयोग गरिएको थियो । मैदान अनुसार घेरा नभएको बहिरंग मैदानमा खेलाउदा एक टोलिमा ४ जना र समय पनि अलिक ज्यादा सम्म खेलाइने गरिन्छ ।
सम्भवत भण्डारी यसरी बिदेशी माटोमा पोलो खेल खेल्ने तथा हात्ती पोलो खेल्न अमेरिकाबाट नेपाल समेत सहभागी हुने एक मात्र महिला नेपाली खेलाडी हुन् ।
यति मात्र हैन भण्डारी आफ्नै खर्चले कहिले बर्दिया पुग्छिन भने कहिले चितवन सौराहामा समेत गएर हात्ती पोलो प्रतियोगितामा सहभागिता भएर बिजयी समेत भएर फर्किन्छिन । यसको अतिरिक्त भण्डारी गल्फ खेलाडी पनि हुन् भने प्रतियोगितामा भाग लिदै आएकी छन ।
उक्त मैत्रीपूर्ण खेलमा बिजयी भए पछि खेल्न ईच्छा हुनेलाई सहभागी हुन् समेत आग्रह गरेकी छिन् । खेल अलिक महँगो हुने हुनाले नेपाली समुदायहरु आफूले अहिले सम्म नदेखेको बताउदै खेल सरल भएकोले नेपाली समुदायलाई खेल खेल्न समेत आग्रह गरेकी छिन् ।
गत बर्ष चितवनमा भएको हात्ती पोलो प्रतियोगितामा भण्डारलाई उत्कृष्ट खेलाडी घोषित गरिएको थियो । भण्डारी डीसी महानगर क्षेत्रमा स्थापित नेपाल स्पोर्ट्स एण्ड कल्चर इन्टर नेसनल कि कोषाध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ता पनि हुन् ।
स्विडेनले दक्षिण कोरियालाई १-० ले हरायो
४ असार २०७५, सोमबार १९:३५030
१२ फाल्गुन २०७५, आईतवार १८:४४043
आज हुने विश्व कपको तीन खेलमा यी ६ देश भिड्दैछन् एकआपसमा
१० असार २०७५, आईतवार ११:३०041
Hey Buddy!, I found this information for you: "नेपाली मूलकी एक मात्र घोडे पोलो खेलाडी केमिका भण्डारीको टोली पोलो प्रतियोगितामा बिजयी". Here is the website link: https://www.namasteholland.com/%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%82%e0%a4%b2%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%98%e0%a5%8b%e0%a4%a1/. Thank you.